Tatoazy phoenix vehivavy, fomba tsara iray hanehoana ny fahaterahana indray | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy phoenix vehivavy, fomba tsara iray hanehoana ny fahaterahana indray
Nat Cherry | | Tatoazy biby
Tatoazy Phoenix Ny vehivavy dia lohahevitra mahafinaritra hanentanana antsika amin'ny tatoazy manaraka. Ireto zavamananaina ireto dia manana heviny sarobidy, araka ny ho hitantsika manaraka.
Raha te hahafantatra ny fomba hanararaotana an'io koa ianao tombokavatsa, tohizo ny famakiana!
1 Ny tandindona mahery amin'ny phoenix
2 Ahoana no hanararaotana an'ity tatoazy ity?
Ny tandindona mahery amin'ny phoenix
Mahita phoenixes amin'ny kolontsaina maro samihafa isika, ary miresaka zavatra mitovy na kely kokoa izy rehetra (angamba izany no biby angano malaza). Na dia misy fiovana arakaraka ny kolontsaina aza dia inoana fa ny phoenix dia vorona izay, rehefa tonga ny fotoany, dia may. Avy amin'ny lavenona dia misy atody iray izay hiterahana phoenix vaovao.
Nandritra ny fotoana ela dia nino fa ny majika dia manana toetra majika, ohatra ny manasitrana ireo naratra lavo tamin'ny ady. Noho izany dia mifandraika amin'ny fitsanganana amin'ny maty sy fanavaozana, ny fiovana misy ny zavatra mifarana fa misy zavatra tsara kokoa natomboka.
Ahoana no hanararaotana an'ity tatoazy ity?
Misy zavatra iray izay mirona hifanaraka amin'ny tatoazy phoenix manaja tena ho an'ny vehivavy (na ho an'ny lehilahy): ny loko mena. Efa nanontany tena ve ianao hoe maninona? Mazava ho azy fa noho ny llamas izay mifandray amin'ny faran'ny fiainan'ity biby mahafinaritra ity, fa noho ny anarany ihany koa. Phoenix, amin'ny teny grika, midika hoe 'mena' na 'mena-mena'.
Noho izany, Mba hahazoana tombony betsaka amin'ity tatoazy ity dia azonao atao ny misafidy ireo loko sainam-pirenena ireo, noho izany dia hahagaga. Ho fanampin'izay, rehefa manapa-kevitra ny amin'ny toeran'ny phoenix ianao dia afaka misafidy amin'ny famolavolana marindrano (misy elatra mivelatra) na mitsangana (miakatra avy amin'ny lavenony, ohatra). Na izany na tsy izany dia ampirisihina ianao hisafidy endrika izay lehibe loatra ka tsy ho very ny antsipirian'ny phoenix.
Manantena izahay fa nahaliana anao ity lahatsoratra momba ny tatoazy phoenix vehivavy ity. Lazao aminay, manana tatoazy toy izao ve ianao? Fantatrao ve ny dikany? Lazao anay izay tadiavinao amin'ireo hevitra ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy biby » Tatoazy phoenix vehivavy, fomba tsara iray hanehoana ny fahaterahana indray
Tato omby, fantaro ny dikany mahavariana
Tatoazy Mpiandry Alemanina